Na-ekpughere mwakpo ụjọ na Lebanọn? Ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ elu Beirut
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Na-ekpughere mwakpo ụjọ na Lebanọn? Ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ elu Beirut
Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mwakpo ụjọ nwere ike ịmalite na Lebanọn.
Nnukwu ogbunigwe mere ka isi obodo Lebanọn bu Beirut merụọ ọtụtụ mmadụ ahụ ma bute mbibi zuru ebe niile. Mgbawa ahụ pụtara na ọ dị n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri Beirut ma windo windo gbawara.
Onye ọrụ Red Cross nke Lebanọn kwuru na ọtụtụ narị mmadụ nwụrụ na Beirut gbawara, gụnyere ndị nwụrụ na ndị merụrụ ahụ. Dabere na AP, ọnụọgụ ndị nwụrụ anwụ amabeghị ozugbo, mana awa ole na ole gachara, ụgbọ ihe mberede ka na-ebupụ ndị merụrụ ahụ, ndị isi kwuru na ụlọ ọgwụ Beirut juputara. Ndị helikopta ndị agha nyeere aka n'agha ọkụ na-ada n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Enwere mmebi a kọrọ na Beirut Ọdụ ụgbọ elu n'ihi mgbawa ahụ mere n'ọdụ ụgbọ mmiri.
E kwuru na ebe ihe gbawara bụ "nnukwu ọkụ" n'ụlọ nkwakọba ihe maka ndị ọrụ oku dị nso Beirutọdụ ụgbọ mmiri.
Sources say: Ọ bụghị n'ihi nke ezimezi oku nchekwa unit. Enwere saịtị bọmbụ dị iche iche 2 nke a bụ ọgụ na Lebanọn.
A tweet kwuru: Biko kpee ekpere maka anyị ihe a gbawara mere ugbu a na mba m Lebanon. Ha kwuru na ihe dị n'ụgbọ mmiri gbawara nnukwu ihe ma ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ ma nwụọ ma ọtụtụ ụlọ bibiri !!! Ana m ebe ákwá! Biko kpeere anyi ekpere! O buru ibu nke ukwuu.
Ọzọ tweet kwuru, sị: Oge na-adịghị anya ịmata ihe kpatara oke mgbawa ahụ, mana o doro anya na ndị nkịtị enweghị ndụ.
Abbas Ibrahim, onye isi ndị nchekwa General Lebanon, gwara ndị mgbasa ozi mpaghara na "nnukwu ihe mgbawa" ndị ejidere na mbụ ka echekwara na saịtị ahụ.
Oké mgbawa na Beirut, Lebanọn ka mere. Nke a abụghị ihe nkiri. Ọ mere. Nke a bụ vidiyo nke mgbawa na akụkụ 7 dị iche iche. Kpee ekpere maka Lebanon
Lelee eri iji nyere aka
AP na-akọ, na Abbas Ibrahim, onye isi ndị isi Lebanọn General Security, kwuru na ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara mgbawa siri ike nke napụrụ ụgbọ mmiri n'oge gara aga ma debe ya n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọwa telivishọn dị na LBC kwuru na ihe ndị ahụ bụ sodium nitrate.
Otu onye ọrụ gọọmentị n'Izrel kwuru na Israel "enweghị ihe ọ bụla" banyere mgbawa ahụ. O kwuru okwu n’aha nzuzo n’ihi na enyeghị ya ikike iso ndị mgbasa ozi kpaa nkata a. Ndị isi Israel anaghị ekwu okwu banyere "akụkọ si mba ọzọ."